October 2021 – Kavrepati
October 31, 2021	मनोरंजन 0
अमेरीकी रियालिटी सोमा नेपालीले गीत गाएर गरे कमाल, यसरी नचाए सबैलाई (भिडियो सहित) ह्वात्तै बढ्यो प्याजको मूल्य , प्रतिकिलो कति पुग्यो त ? नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहार नजिकिएसँगै बजारमा प्याजको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि भएको छ । प्याजको मूल्य एक महिनामै दोब्बर भएको हो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी …
October 31, 2021	राशिफल 0
ज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल कार्तिक १५ गते सोमबार इश्वी सन २०२१ नोभेम्वर १ तारीख कार्तिक कृष्णपक्ष एकादशी तिथी पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र ऐन्द्र योग कौलव करण चन्द्रमा सिंह राशिमा पश्चात कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा ध्वज योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु रमाएकादशीव्रत गोवत्सद्वादशी (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, …
October 31, 2021	रोचक 0
सियोल-दक्षिण कोरिया अहिले नेपालीहरुको रोजगारीको रोजाईको देश बनेको छ । आकर्षक ज्याला भएका कारण वैदेशिक रोजगारको गन्तव्यमा रोजाईको देश रहेको दक्षिण कोरियामा करिब ४३ हजार नेपालीहरु रहेका छन । विभिन्न पेशा, ब्यबसाय, विद्यार्थी, प्राध्यापक लगायत कोरियन नागरिक संग बिबाह गरेर आउनेहरु पनि रहेका छन ।कोरियामा नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएपछी विभिन्न …
चर्चित युट्युबर भाग्य न्यौपाने सुटुक्क बिहे गरेर, ल’गत्तै ह’निमुनमा नि’स्किए
काठमाडौँ – दर्पण छायाँ विबाह लगत्तै हनिमुनमा निस्किए चर्चित युट्युबर भाग्य न्यौपाने, लामो समयदेखि हराएका भनिएका भाग्यकी यति सुन्दर रहिछन् पत्नि, यि हिरोइन जस्ती पत्निसँग हनिमुन मनाइरहेको भाग्यको भिडियो एकाएक बन्यो भाइरल, हेर्नुहोस् तेस्तै : हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले पनि केहि समय अघि विवाह गर्नु भएको छ । उहाँले न्याय …
डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीसंग सम्बन्ध बनाउन यी श्रीमानले जे गरे त्यो कसैले सोच्नै सक्दैनन !
October 31, 2021	समाचार 0
डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीलाई क’र’णी ग’रे’को आरोपमा सुनसरीको धरानबाट एकजना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीलाई क’र’णी ग’रे’को आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले वडा नं. १५ निवासी भोजराज थापा ‘फडिन्द्र’लाई पक्राउ गरेको हो। इप्रका धरानका डीएसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार पूर्वपत्नीलाई क’ र’ णी ग’रे’को उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन्। …
काठमाडौं । पछिल्लो दशक बढ्दो प्रदूषण र धुवाँधुलोका कारण मानिसको छालामा नकारात्मक असरहरू देखिन थालेको छ । प्रदूषणका कारण अनुहारमा डण्डीफोर तथा अनेक दाग आउने समस्या नै छालाको एलर्जी हो । छाला रातो या निलो हुनु, चिलाउनु तथा दाग देखिनु छालामा एलर्जीका लक्षण हुन् । कहिलेकाहीँ कीराको टोकाइबाट पनि यस्तो …
कोभिड महामारीका कारण अहिलेसम्म विश्वमा ५० लाख जनाको मृत्यु भइसकेको छ । महामारीकै कारण संसारभर २४ करोड जना जना संक्रमित छन् । त्यस्तै, कोभिडले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित छ । महामारीका कारण प्राय देशको अर्थतन्त्र चौपट परेको छ । तर, संसारमा एउटा मात्र देश छ जहाँ पहिलो पटक एक जनामा …
खक्राैला / टीकापुर नगरपालिका वडा न ८ कालिमाटीमा खुकुरी प्र’हारबाट एक बालककाे ज्या’न गएकाे छ । टीकापुर नगरपालिका वडा न ८ कमलगाउँका १७ बर्षिया बालक अनुप साउँदकाे खुकुरी प्र’हारबाट ज्या’न गएकाे हाेराति करिब साढे ८ बजे तिर डिजेमा नाच्ने बेलामा सामान्य विवाद भएको र साेहि बेला भजनी नगरपालिका वडा न …
October 31, 2021	प्रमुख समाचार 0
यमलाल भुसाल, बुटवल । रूपन्देहीको सैनामैनामा बिरामी परेको भैंसीको मासु खाँदा गाउँ नै आ’तंकि’त भएको छ । नगरको वडा नं. ७ देउवापारस्थित स्मृति टोलमा कुकुरले टो’के’र बिरामी परेको भैंसी का’टे’र मासु खाँदा गाउँ नै आ’तंकि’त भएको हो । गत असोज १९ गते घटस्थापनाका दिन सैनामैना–८ पीपलडाँडा ठूली ओकाली निवासी एक …